Xavi Hernandez: “Julen Lopetegui wuxuu gaaray go’aan layaab leh waqti aan ku habooneen” – Gool FM
(Spain) 13 Juunyo 2018. Kabtankii hore ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez ayaa dhaleeceeyay go’aanka uu tababare Julen Lopetegui ku ogolaaday inuu leyliyo kooxda Real Madrid, maadaama uu ahaa macalinka xulka qaranka Spain.
Real Madrid ayaa sheegtay Julen Lopetegui ay khamiista u soo bandhigi doonto saxaafada si uu u noqdo badalka Zidane, kadib markii laga soo casilay shaqada tababarka ee xulka qaranka Spain kahor saacado inta uusan bilaawan koobka aduunka 2018.
Xavi Hernandez ayaa wareysi uu siiyay wargeyska “Sport” wuxuu ku sheegay “Lopetegui wuuu qaatay go’aan ila muuqda inuusan ahayn waqtigii ku haboonaa, waxayna lama filaan ku noqotay qof walba”.
“Waxaan filayaa in madaxweynaha xiriirka kubada cagta dalka Spain uu qaatay go’aanka saxda ahaa oo ay shaqada kaga ceeriyeen Lopetegui”.
“Ma ihi qofka ku haboon inuu arintan ka hadlo iyo dhaq dhaqaaqa ay sameesay Real Madrid, balse hadii aan u hadlo sida ciyaaryahan hore waxaan u maleenayaa in xiriirka kubada cagta dalka Spain waxay ahayd inuu shaqada ka casilo Lopetegui waana ay dhacday”.
Go’aanka Mbappé kaga aadan kulanka Australia oo la ogaaday, kadib dhaawacii kasoo gaaray tababarka
Taageerayaasha Manchester United oo doortay shaxda ugu fiicneed taariikhda kooxda Red Devils